IHuawei iya kuqhubeka nokwenza iiprosesa zayo zaseKirin ngaphandle kweengxaki | I-Androidsis
Ukuphefumla umoya omtsha weHuawei: uya kuba nakho ukuqhubeka nokuvelisa iiprosesa zayo zaseKirin
Imeko yangoku yeHuawei ayilunganga ncam. Inkqubo ye- I-veto eyenziwa yi-United States yonakalisa kakhulu umenzi waseAsia. Ukuthengiswa kweefowuni zabo kuye kwehla kakhulu eYurophu kwaye, izolo sifumanise ukuba utyikityo awunakusebenzisa ikhadi le-microSD kwisisombululo sakho. Kodwa ekugqibeleni iindaba ezimnandi ze Huawei.
Ewe umenzi osekwe eShenzhen uya kuba nakho ukuqhubeka nokuvelisa uluhlu lwayo lwe-Hisilicon Kirin SoC. Isizathu? I-TSMC ayizukuqubuda kwizithintelo zikarhulumente wase-US. Hayi, ayizukujoyina Veto Huawei ukuba yenziwe yi-Intel, uGoogle kunye ne-ARM phakathi kwezinye iimveliso. Kodwa ukwazile ukubaleka le veto?
I-TSMC ayilawulwa yimithetho yokuthumela ngaphandle yase-US, kakhulu kuncedo lukaHuawei
Ngokwimithombo yeendaba eyahlukeneyo, ikomkhulu le TSMC iseTaiwan (igama layo elibizwa ngokuba yiTaiwan Semiconductor Manufacturing Co), kwaye, ingekho phantsi kwemithetho yokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe eUnited States, inokuba ngumvelisi weeprosesa zikaHuawei. Ewe ukulahleka kwe-ARM sisibetho esibi, kodwa ubuncinci ifemu isenomboneleli omtsha weli candelo libalulekileyo kuso nasiphi na isixhobo sombane senkampani.
Kwakhona kubonakala ngathi Huawei wayeyazi indlela yokufihla umva wakhe kwangaphambili phambi kwe-veto enokwenzeka ngurhulumente wase-United States. Ngale ndlela, inkampani yaseAsia inelayisensi esisigxina eyivumela ukuba ifikelele kuyilo lobugcisa be-ARMv8, oko kuthetha ukuba iya kuba nakho ukuqhubeka nokuvelisa iichips ngokusekwe kolu lwakhiwo.
Njengoko besitshilo, impefumlo emnandi yomoya omtsha okhanyisela ikamva elimnyama likaHuawei. Ewe kunokwenzeka ukuba urhulumente kaDonald Trump uyayiphakamisa i-veto kumenzi waseAsia, kodwa ukubetha okuthathe umfanekiso wenkampani kuya kuba nzima kakhulu ukubuyela kwakhona. Ukubona iingxaki onazo, kwaye unokuphinda ube nazo kwixesha elizayo, uyayenza ungathenga iselfowuni yeHuawei?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ukuphefumla umoya omtsha weHuawei: uya kuba nakho ukuqhubeka nokuvelisa iiprosesa zayo zaseKirin
I-Tafayor, i-antivirus elula kakhulu ye-Android kwiselula yakho